MACTIFF SHEPHERD DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Mactiff Shepherd Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Adhijirka Jarmalka / Eyga eeyaha Mastiff ee Isku-dhafan Mastiff
Harley the English Mastiff iyo Jarmal Shepherd ayaa isku qasan markay jiraan 2 1/2 sano jir— 'Harley hooyadeed waxay ahayd mid saafi ah Adhijirka Jarmalka , oo culeyskiisu yahay qiyaastii 75 rodol. Aabihiis wuxuu ahaa saafi Mastiff , oo culeyskiisu yahay qiyaastii 180 lbs. Haatan waa 2.5 jir, culeyskiisu yahay qiyaastii 150 lbs welina wuu korayaa! Wuxuu ku istaagayaa 6 ft. Dhererkiisa lugaha dambe. Waa eey cajiib ah. Wuxuu leeyahay dabeecad la yaab leh. Aad buu u nastay oo waa u naxariis badan yahay carruurteenna yaryar. Dhinaciisa ayuu u jiifsadaa haddii ilmuhu u soo dhawaado isaga oo wata alaabtiisa uu jecel yahay ... inkasta oo uu jeclaan lahaa inuu ciyaaro. Wuxuu gabi ahaanba iska tuuray alaabada ay ku ciyaaraan oo uu leefleeyaa faraha iyo suulasha wuxuuna jecel yahay inuu noqdo jimicsiga hawdka. Haddii kale, wuxuu jecel yahay inuu jiifsado agtiisa carruurta inta lagu guda jiro ciyaar kooxeed oo u dhow iyaga uun. Hadday bannaanka ku ciyaarayaan, isagu wuxuu kormeeraa wareegga ardaaga oo wuxuu u rogaa carruurta aad ugu dhow xayndaabka isagoo hortooda maraya illaa ay iska ilaawaan meesha ay tegayaan oo ay ku leexanayaan LOL. Wuxuu jecel yahay inuu iskala fadhiisto, laakiin markuu banaanka u soo baxo wuxuu jecel yahay isku dhac, ku ciyaar kubadaha tennis-ka iyo laamo waaweyn oo geedo ah! Laakiin toy uu jecel yahay waa tilmaamaha laser . Isagu waa nin caqli badan. Markii aan ahaa uur leedahay marwalba calooshaa leefleefi lahaa. Waqti kasta oo aan ku bukoodo musqusha, wuu yimaadaa oo madaxiisa ayuu saarayaa dhabta inta aan ka dhammaysanayo, ka dibna wuxuu ilmada iga siinayaa :) isla carruurta. Isagu waa wiil macaan. Iskusoo wada duuboo waxaas oo dhan, isagu waa sidaas digtoonaan ku hareeraysan . Iyo haddii ' ku soo xadgudbay 'Wuxuu imaanayaa guriga intaan maqanahay, wuxuu cadeeyay inaysan soo dhaweyn. (Waxaan saaxiibkeen ku tijaabinay aragtidan si farxad leh waana ku wada qanacnay natiijada!) Isagu waa xayawaankeenna loogu jecelyahay. Wuu firfircoon yahay inuu ciyaaro laakiin ma ahan mid dalbanaya oo wax dumin kara. Wuxuu jecel yahay inuu wax cuno laakiin sidoo kale waa madax-bannaan yahay, feejignaan laakiin ma qaylinayo si aan kala go 'lahayn, dareen dabiici ah oo dabiici ah oo ilaalin ah laakiin ma badna oo wuxuu yaqaanaa goorta la ilaalinayo iyo goorta loo oggolaanayo alfayada inay masuulka ka noqdaan. Waa mas'uul khafiif ah oo ilaaliya carruurta yaryar iyo xitaa kan bisad iyo digaag . Waxa uu leeyahay quruxsan hooseeya ugaadhsasho sidoo kale ... wuxuu sameyn lahaa roondooyin wareega ah digaagga noocyada bilaashka ah si loogu ilaaliyo deyrkeena, iyo waxa ugu dhow ee aan dhibno waxay noqon kartaa in mararka qaarkood lagu dhex maro adhiga si loo daawado iyaga oo firdhiya ka hor inta aan koox koox la isugu soo ururin LOL! Ma aha in aan xuso wuxuu umuuqdaa mid qabow sida cadaabta oo kale :) Kama walwalayo kuwa ku soo xadgudbay. '
Ingiriis Mastiff Shepherd
Jarmalka Mastiff Shepherd
Mastiff Shepherd-ka maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Adhijirka Jarmalka iyo Ingiriisi Mastiff . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Harley Ingiriisi Mastiff iyo Jarmal Shepherd waxay isku qasan yihiin 2 1/2 sano jir
Nala Ingiriisi Mastiff / Jarmal Shepherd isku dhafan oo u eg markay 8 toddobaad jirsato— 'Nala waa iskutallaab Jarmal X X Ingiriis Mastiff ah. Waxay jirtaa sagaal toddobaad. Iyadu waa eey aad u caajis badan oo hurdo badan, oo umuuqda inay leedahay wax badan oo ka mid ah dabeecad xumida. Ma hubno inta ay le'eg tahay inay hesho, dhakhtarku wuxuu u maleynayaa ugu yaraan boqol lbs. Way caajis badan tahay, way ka seexataa xitaa in ka badan eyda caadiga ah. Iyadu waa mid aad u cod badan oo cabaad leh markii aan waddo loo helin ama ay muujiso qanacsanaanta. Waxay hadda tahay 15 lbs. Xaqiiqdii waad ku arki kartaa labada nooc ee iyada ku dhex jira. Iyadu waa 50% Ingiriis mastiff saafi ah iyo 50% daahir jarmal nadiif ah, labadaba AKC way diiwaangashan yihiin. Iyadu waa cayayaan gacmeed dhammaystiran, oo waligeed kaaama rabto indhaheeda. '
Nala Ingiriisi Mastiff / Jarmal Shepherd isku dhafan sida eey markay jiraan 8 toddobaad
adhijir boqorkii soo socda si adhijir Jarmal
Nala Ingiriisi Mastiff / Jarmal Shepherd isku qas sida eey markay tahay 8 usbuuc iyada eyga hound saaxiib
Liiska Eeyaha Ilaalada Wanaagsan
dabada cat laab laab ka badan dib
adhijirka australia iyo puppy puppy puppy
Eyga lo'da ee Australiyaanka ah ee lagu qaso dhoobada
sida loo sheego chihuahua saafi ah
sheltie iyo iskudhafka dhadhanka dahabiga ah
basset hound madow isku darka shaybaarka